कोदोको ढिँडोका यस्ता छन् फाइदाहरू !! | सुदुरपश्चिम खबर
कोदोको ढिँडोका यस्ता छन् फाइदाहरू !!
पहिले पहिले गाउँघरमा मात्र खाइने कोदोको रोटी र ढिँडो अहिले उच्च घराना र चर्चित होटल रेष्टुराहरुको आकर्षक नेपाली खानाको रुपमा स्थापित भएको छ ।ढिडो अहिले शौखको खानाको रुपमा ब्राण्ड बनेको छ । यद्यपी, गाउँघरमा अरु अनाजको अभावमा धेरै हद सम्म बाध्यताको परिकारको रुपमा प्रयोग गरिदै आइएको छ ।
चिसो मौसममा तातो र मिठो परिकार खाने चलन धेरैको हुन्छ । तातो र मिठो खानामाको विषयमा चर्चा हुँदा जाडोयाममा कोदोको ढिँडो पहिलो रोजाइ हुन थालेको छ ।पहिला पहिला–गाउँघरमा चामल उत्पादन कम हुने भएकाले कोदोको ढिँडो बढी खाने गरिन्थ्यो । त्यसैले पनि चामलको भातलाई कुनै विशेष चाडपर्वमा खानुपर्छ भन्ने मान्यता पनि रहेको थियो ।
तर, अहिले समय निकै परिवर्तन भएको छ । गाउ शहरमा चामल भन्दा ढिँडो लोकप्रिय बन्न थालेको छ । परिवारका सबै सदस्य भेट हुँदा घरमा मिठो परिकार बनाउने भनेर चिसोमा ढिडो खाने चलन समेत आएको छ ।शहरी क्षेत्रका ठूला ठूला होटलमा विशेष परिकारको रुपमा ढिडो पाक्न थालेको छ । चिसो मौसम शुरु भएसँगै मानिसहरु कोदोको ढिडोतर्फ लोभिने गरेका छन् ।
चिसो मौसममा रमाइलो मान्दै ढिडो खादा पारिवारिक खुसी मात्र होइन, स्वास्थ्यका लागि पनि निकै लाभदायीक मानिन्छ । कोदोको ढिडो मात्र होइन रोटी र अन्य विभिन्न परिकार समेत बनाएर खाइन्छ । आज हामी कोदोको फाइदाबारे जानकारी दिदैछौं ।
कोदो ढिँडो तथा परिकारको फाइदै फाइदा=
कोदो स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त फाइदाजनक हुन्छ । कोदोका परिकार पचाउन सहज हुन्छ । कोटोमा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, फस्फोरस, म्यागनिज, भिटामिन बी, टिप्टोफेन, फाइबर, एन्टिअक्सिडेन्टलगायतका पोषक तत्त्व पाइन्छ । कोदोका परिकार शक्ति र ऊर्जाका लागि राम्रो श्रोत हो ।
तौल घटाउन कोदो खानु राम्रो मानिन्छ । कोदो खाएको धेरै समयसम्म भोक लाग्दैन । जसले गर्दा तौल नियन्त्रणमा सघाउ पुग्छ ।मुटुका रोगीहरूका लागि कोदोको रोटी खानु धेरै लाभदायक हुन्छ । यसमा प्रशस्त मात्रामा नियासिन हुन्छ, जसले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको स्तर घटाएर मुटु रोगको जोखिम पनि कम गर्छ ।यसबाहेक यसमा भएको पोटेसियम र म्याग्नेसियमले रक्तचाप नियन्त्रण राख्न सघाउँछ । कोदामा प्रशस्त मात्रामा भएको क्याल्सियमले हाड बलियो बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । कोदोमा हुने आइरनले रक्त अल्पता हुन दिदैन ।
यस्तै कब्जियत र ग्यासको समस्या भएकाहरूले नियमित रुपमा कोदोको रोटी वा ढिडो खाने गरे आराम पाइन्छ । मधुमेहको खतराबाट बच्न कोदोको परिकार लाभदायक छ । (gnewsnepal.com बाट सभार)
गर्मीमा पुदिना खानुका यतिधेरै फाईदाहरु !!
समयमा सुत्ने समयमा उठ्न गर्नाले हुन्छन् यस्ता फाइदाहरु !!
यी ४ समस्या भएका व्यक्तिले नखानुहोस् केरा, माइग्रेनमा पुर्याउँछ गम्भिर असर !!
छिटो छिटो लाग्ने समस्या छ भने अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय !